महिला हिंसा भनेको के हो ?
महिलाको मानव अधिकारको उल्लङ्घनको प्रमुख विषय महिला माथिको हिंसा पनि हो । महिला हिंसा आफैमा एक जघन्य अपराध हो । महिला हिंसा समाजको एउटा त्यो रूप हो, जसले महिलाका सामान्यभन्दा सामान्य अधिकार हनन गरिरहेको हुन्छ । महिला भएकै कारणले महिला माथि गरिने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा वौद्धिक शोषण,दमन, यातना रदुर्व्यवहारहरूलाई महिलामाथि हुने हिंसा भनिन्छ । जसअन्र्तगत बलात्कार, घरेलु हिंसा, हत्या (कुटपिट), बोक्सी आरोपमा गाउँ निकाला, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, जवरजस्तीकरणी, र अन्य मानसिक तथा शारीरिक यातनादेखि महिलालाई अपहेलना महसुस हुने कुनै पनि धम्क्याउनेदेखि जिस्क्याउनेसम्मका घटना पर्दछन्।
महिला हिंसा न्युन गर्न सर्वप्रथम महिला आफै सचेत हुनु जरूरी छ । महिला हिंसा बढ्नुको प्रमुख कारण जनचेतनाको अभाव नै हो। त्यसैले उनीहरूको अधिकार के हो ? कहाँ र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा सिकाउनुपर्दछ। जसको लागि राज्य र अन्य सरोकारवाला सबैले परिणाममुखी योजना र कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ। जुन योजना र कार्यक्रम, सदरमुकाम मात्रै बजेट सिध्याउन नभइ समाजका हरेक महिला महसुस गर्ने गरी हरेक गाउँ अनि घरमा पुग्नु आवश्यक छ । जसबाट महिलालाई हिंसाविरुद्ध वैचारिक तथा भौतिक प्रतिकार गर्न सक्ने बनाउनुपर्दछ।
नेप्से परिसूचक बुधवार ६० भन्दा बढी अंकले बढेको शेयर बजार आज भने १७।६४ अंकले गिरावट
दोस्रो पटक सर्वसाधारणका लागि दोर्दी खोला कम्पनीको आईपीओ खुला
वागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको आवश्यक्ताअनुसार नभएको सांसदहरुको गुनासो
1. नेप्से परिसूचक बुधवार ६० भन्दा बढी अंकले बढेको शेयर बजार आज भने १७।६४ अंकले गिरावट
2. दोस्रो पटक सर्वसाधारणका लागि दोर्दी खोला कम्पनीको आईपीओ खुला
3. वागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको आवश्यक्ताअनुसार नभएको सांसदहरुको गुनासो
4. उच्च स्वाभिमानले कसरी सबैको मन सहजै जित्छ। यस्ता रहेछन् कृयाकलापहरु
5. महिला कर्मचारीलाई सुत्केरी बिदा अनिवार्य उपलब्ध गराउन आग्रह: स्वास्थ्य मन्त्रालय
5. श्रीमानको साथ र राजनैतिक यात्रा नै मेरो सफलताको बाटो हो : विन्दु पुडासैनी सिंखडा
उच्च स्वाभिमानले कसरी सबैको मन सहजै जित्छ। यस्ता रहेछन् कृयाकलापहरु